महानगरका महामूर्ख महामहिमहरू | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
घर मन्तव्य महानगरका महामूर्ख महामहिमहरू
महानगरका महामूर्ख महामहिमहरू
सरकारले मुलुकका १४ जिल्लालाई कोभिड (कोरोना) महामारीको उच्च जोखिममा रहेको मूल्याङ्कन गरेको छ। सरकारको घोषणामा हाम्रFे पर्सा जिल्ला पनि परेको छ। अन्य जिल्लाको सुरक्षा सतर्कता त मलाई थाहा भएन तर कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको पर्सामा भने यो रोगलाई मजाक र खेलाँचीको रूपमा लिइएको देखिन्छ। यहाँ मास्क प्रयोग नगर्ने, पसलेले समेत सामान बिक्री गर्दा पञ्जा र मास्कको प्रयोग नगर्ने, कमैले सेनिटाइजर र साबुनको प्रयोग गर्ने, निर्बाध रक्सौल आवतजावत गर्ने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, पानी, सुर्ती खौवाहरूले सडकमा जथाभावी प्याच्च–प्याच्च थुक्ने, जथाभावी मलमूत्र त्याग्ने, सडेगलेका र नछोपी राखिएका खानेकुराहरू खुला सडकमा सरेआम बेच्ने, झिङ्गा, लामखुट्टेको प्रकोप रोकथाम गर्न महानगर उदासीन देखिने, जनावरहरूबाट समेत कोरोना फैलिन सक्ने भएपनि सडकमा जथाभावी गाईवस्तु र भुस्याहा कुकुरको रजाइँ देखिने तथा ग्रामीण भेगबाट वीरगंज बजारमा ल्याइने मूला, गाजर, काँक्रो तथा सागसब्जीहरू किसानले श्रीसिया नदी तथा फोहर तलाउको पानीले पखालेर ल्याउने गरिएको छ।
विनास्वास्थ्य सावधानी यहाँका सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयमा समेत प्रवेश निषेध छैन। अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन दुना रात चौगुना बढ्दो छ। इङ्गल्यान्डमा देखिएको युके भेरिएन्ट र नयाँ भेरिएन्टसहितको कोरोना नेपालमा समेत देखिएको स्पष्ट भइसकेको छ। कोरोना भाइरसले देर सबेर आप्mनो स्वरूप परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्दैछ।
सरकारले केही दिनअघि अत्यन्त जरुरी अपील गर्दै नयाँ कोरोना भाइरसले केटाकेटी र युवालाई सङ्क्रमण गर्न थालेको बताएको छ। कोरोनाको दोस्रो चरणको यो वेगमा सतर्क र सुरक्षित रहनसमेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपील गरेको छ। त्यस्तै, बढ्दो सङ्क्रमणको अवस्था निक्र्योल गरेर स्कूल, कलेज बन्द गराउने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिएको छ। सरकारले सुझाएको सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आनाकानी र अटेर गर्ने पर्सेली नागरिक आप्mना बालबालिकाहरूलाई स्कूल पनि पठाउँदै छन्। पढेलेखेका अनुभवी अभिभावकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाबारे नबुझेको यो जिल्लामा ती कलिला स्कूले नानीहरूले स्वास्थ्य सतर्कताबारे के थाहा पाउनु ?
स्कूल बसहरूले अझैसम्म यहाँ गुन्द्रुक खाँदैझैं विद्यार्थी कोच्ने, स्कूल बसका ड्राइभर, खलासी र बच्चाहरूसमेतले सामाजिक दूरी र मास्क प्रयोग नगर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग नगर्ने, स्कूलमा समेत कोचाकोच विद्यार्थी राख्ने गरेको देखिन्छ। बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम चलाएर स्कूल, बोर्डिङ बन्द गर्न अबेर भइसकेको महसूस हुन थालेको छ। शिक्षा सँगसँगै स्वास्थ्यसमेत बहुमूल्य छ भनेर किन कसैले नबुझेको होला?
वीरगंजमा च्याउझैं निजी विद्यालयहरू खोलिएका छन्। वीरगंजको मेनरोडमा बिहानदेखि बेलुकासम्म विद्यार्थी बोकेका पहेंला बसले सडक ढाकेर गुडिरहेको अझैसम्म देखिन्छ। हरि खेतान क्याम्पस र गौतम स्कूलका बसहरू अझैसम्म कलैया र वरपरका विद्यार्थी लिन र पु–याउन गइरहेका छन्। वीरगंजमा रहेका ५० भन्दा बढी निजी स्कूलमध्ये केही, कुनैबाहेक अधिकांश विनास्वास्थ्य सुरक्षा निर्बाध सञ्चालित छन्। अथाह कमाइ हुने भएकोले पर्सामा अधिकांश साहु महाजन र नेताहरूले निजी स्कूल, कलेज खोलेर कमाइ गर्दै आएको सबैलाई थाहै छ।
सरकारले सिंहदरबारको अधिकार दिएन भन्ने स्थानीय तहलाई कोरोनाको भयावहता हेरेर शिक्ष्Fण संस्था बन्द गर्ने अधिकार दिए पनि वीरगंज महानगरपालिका लाटोले केरा हेरेर बसेकोझैं गर्दैछ। यिनको यस्ता आचरणलाई धेरैले महानगरका महामूर्ख महामहिम भन्न थालेका छन्। हेक्का रहोस्, जहाँ भीड, त्यहाँ कोभिड।
अघिल्लो लेखमाकालिकाले जवाफ दिनुप–यो
अर्को लेखमापुस्तक र लोकतन्त्र
ओझेलमा परेका पात्र
लगे रहो मुन्नाभाइ
बिजोग पर्सेली काङ्ग्रेसको
शहीद दिवसको सन्दर्भमा
मदन र झाँक्री